Iindaba - Ukususela ngoJanuwari ukuya ku-Epreli
Ukusukela ngeyoMqungu ukuya ku-Epreli, iilori ze-forklift ezingama-48,271 zathunyelwa ngaphandle, zenyuka nge-2.47% ngonyaka
Ngokwezibalo zeSebe lezoThutho laseShayina loMbutho woShishino loLwakhiwo lwaseChina, iifolokhwe ezingama-69,719 zathengiswa ngo-Epreli 2020, kunye nokunyuka konyaka nge-12,915, ukonyuka nge-22.7%; Phakathi kwawo, amashishini asekhaya athengise iiyunithi ezingama-64,461 kuloo nyanga, ukonyuka kweeyunithi ezili-12,945 unyaka nonyaka, ukwanda ngama-25.1%; Umthamo wentengiso yamashishini angaphandle kwinyanga leyo yayingama-5258, ezantsi iiseti ezingama-30 ngonyaka, okanye i-0.57%. Ngo-Epreli, iifolokhwe zombane zathengisa iiyunithi ezingama-33,750, ukonyuka kweeyunithi ezingama-9,491 unyaka nonyaka, zenyuka nge-39.1%; Umthamo wentengiso yeefolokhwe zomlilo zangaphakathi yayiyiyunithi ezingama-35,969, ukonyuka kweeyunithi ezingama-3,424 ngonyaka, ukunyuka nge-10.5%. Iifolokhwe zombane zenza i-48.4%.
Ukusukela ngeyoMqungu ukuya ku-Epreli ngo-2020, i-forklifts ze-197,518 zathengiswa zizonke, kunye nokwehla konyaka-nge-12,265 okanye nge-5.85% ngonyaka. Phakathi kwawo: amashishini asekhaya athengise iiseti ezili-181,107, iiseti ezingama-7129 ngaphantsi konyaka ophelileyo, ezantsi ngama-3.79%; Umthamo wentengiso eqokelelweyo yamashishini angaphandle ibiyi-16,411, eye yehla nge-5,136 okanye i-23.8% xa kuthelekiswa nelo xesha linye kulo nyaka uphelileyo. Umthamo wokuqokelelwa kwentengiso yeetraki zombane zeelori zeeyunithi ezingama-95,697, ukonyuka kweeyunithi ezingama-3,788 unyaka nonyaka, ukonyuka nge-4.12%; Iifolokhwe zombane zenza i-48.4%, kwaye umthamo wokuthengisa oqokelelweyo weefolokhwe zomlilo zangaphakathi yayiyiyunithi ye-101,821, iiyunithi ze-16,053 zangaphantsi kunelo xesha linye kunyaka ophelileyo i-13.6%.
Ukuthengisa iilori ze-Forklift ngo-Epreli kwakuyiyunithi ezingama-56,626, ukonyuka kweeyunithi ezili-11,316 ngonyaka, ukunyuka ngama-25%. Ukusukela ngeyoMqungu ukuya ku-Epreli, intengiso yasekhaya ifikelele kwi-149,247, yehla nge-8.25% ngonyaka.
Ukuthunyelwa ngaphandle kwe-forklift kweeyunithi ze-13,093 ngo-Epreli kubalwe i-18.8% yexabiso lokuthengisa elipheleleyo ngenyanga, ukuya kwiiyunithi ezili-1,599 unyaka nonyaka, ukuya kwi-13.9%. Phakathi kwabo, ukuthunyelwa ngaphandle kweelori zombane ze-forklift kwinyanga leyo yayiziiyunithi ezingama-9,077, ukonyuka kweeyunithi ezingama-2,335 unyaka nonyaka, ukuya kuma-34.6%; Ukuthunyelwa komlilo ngaphakathi kweforklift kwinyanga enye iiyunithi ezingama-4016, iiyunithi ezingama-736 ezingaphantsi kwelo xesha kulo nyaka uphelileyo, zehle nge-15.5%. Ukuthunyelwa kombane ngaphandle kwe-forklift kubalwa i-69.3%.
Ukusukela ngeyoMqungu ukuya ku-Epreli, ukuthunyelwa ngaphandle kweelori ze-forklift yayiyi-48,271, ebala i-24.4% yevolumu yokuthengisa iyonke, ukonyuka kwe-1163 yeeseti unyaka nonyaka, ukonyuka kwe-2.47%. Phakathi kwazo, i-forklifts zombane ezingama-33,761 zathunyelwa kumazwe angaphandle, ukwanda nge-3,953 okanye i-13.3% ngonyaka ngonyaka. Ukuthunyelwa kwamanye amazwe kweelori zombane ze-forklift zibalelwa kuma-69.9%, kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe kwiitroli ze-forklift zangaphakathi kwakuyiyunithi ze-14,510, ukwehla ngonyaka kwiiyunithi ezingama-2,790 okanye i-16.1%.